IGold Standard Beachfront Room yaBucala-Reef Shark
Sibekwe elunxwemeni, uhambo lwemizuzu emihlanu ukuya embindini wedolophu. Ihostele yethu yeebhedi ezingama-40 kunye namagumbi abucala ama-3 akhapha indawo yethu yokutyela/ibha. Umoya womoya usemgangathweni kunye neWiFi yasimahla kuyo yonke indawo. Ixabiso elingcono eSan Pedro!
Sikukuphela kwehostele ephambi kolwandle eSan Pedro. Sinamagumbi ama-3 abucala kunye neebhedi ezingama-40 zokulala.
Irhafu yehotele ye-9% ifakiwe kwixabiso! Asinalo ikhitshi lasekuhlaleni kodwa wamkelekile ukuba usebenzise ifriji!
Sikukuphela kwehostele ephambi kolwandle eSan Pedro. Sinamagumbi ama-3 abucala kunye neebhedi ezingama-40 zokula…
Umda ongaselwandle kunye nokuhamba nje okufutshane ukuya embindini wedolophu. Zininzi iibhari, iindawo zokutyela kunye neemarike ezikufutshane.
Ndihlala ndilapha ngalo lonke ixesha kwaye ndiqhele ukwazi iindwendwe zam kakuhle.